Indasitiri nhau - Nhau - Shenzhen Wudongfang Tsika Kutaurirana Nha. Co., Ltd. - Page 6
Nhema swan yekugadzirwa kweiyo "mota" chiitiko! Anotamba ballet anopfeka sei nhema dhiza dhizaini?
Nhema nhema gadziriro ye "mota" chiitiko! Mutambi we ballet anopfeka sei nhema hanzi hove?
Havana kumbozvarwa vakakwana, vatambi vane nguva dzisingaverengeke mushure mekushandurwa kwekudonha
Iwe unoziva here chimwe chinhu nezve tutusï¼Ÿ
Maitiro echipfeko akasiyana pane yega yega ballet yekutamba. Makumbo evatambi veBallet akatwasuka uye akareba, uye siketi yakati sandara inogona kuvaita akareba, uye siketi iyoyo ndeimwe yemhando dzechinyakare dze ballet.
Ndeapi mana akakosha maitiro e ballet?
Kwakatangira tutu ballet
Muna 1713, French Royal Academy yeDhanzi yakatanga kuva Theatre yeParis, uye ballet yakatanga kutora guta. Vakuru veFrance vaiwanzosangana nekukurukura pamabhalkoni akapamhama vachiona vatambi ve ballet vari kure. Kuti uite kuti vatambi vanyatsooneka kune vateereri vari kure, zvipfeko zvevatambi zva......
Mhemberero uye zano re swan Lake ballet
Tchaikovsky akamboreurura kuti akakurudzirwa kunyora Swan Lake nekushomeka kwemari uye chishuwo chenguva refu chekunyora mimhanzi ye ballet, ndosaka takakokwa kuti titeerere kune ballet inozivikanwa kwazvo nguva dzese. Iyi dambarefu naDutwall yakaita Montreal Symphony Orchestra kurekodha, kujekesa k......